Football Khabar » आज ‘फुटबलका पावर हाउस’ स्पेन र जर्मनी भिड्दै : को जाला अर्को चरण ?
आज ‘फुटबलका पावर हाउस’ स्पेन र जर्मनी भिड्दै : को जाला अर्को चरण ?
युइएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति एक ठूलो भिडन्त हुँदैछ, जहाँ विश्व फुटबलका दुई पावर हाउस देशहरू स्पेन र जर्मनी समूह चरणको अन्तिम खेलमा आमनेसामने हुँदैछन् । यो खेल स्पेनको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति ठीक १ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ ।
स्पेन र जर्मनी समूह ‘डी’मा रहेका छन् । हाल अंक तालिकामा समान ५–५ खेलपछि जर्मनी ९ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । ८ अंक भएको स्पेन दोस्रो स्थानमा छ । ६ अंक भएको युक्रेन तेस्रो स्थानमा छ । आज हुने जर्मनी र स्पेनको खेलबाट यस समूहको विजेता टोलीको टुंगो लाग्नेछ ।
हालको स्थितिमा जर्मनीको समूह विजेता बनेर अर्को चरण जाने सम्भावना प्रबल छ । आज स्पेनको भूमिमा उसलाई मात्रै बराबरी नतिजा भए समूह विजेता बन्न पर्याप्त हुन्छ । तर, स्पेनलाई भने अनिवार्य स्पष्ट जित नै चाहिन्छ । यस समूहबाट जर्मनी र स्पेनमध्ये एक टोली अर्को चरण जाने पक्का छ ।
यदि आज स्पेन र जर्मनीको खेल स्पष्ट हार–जितमा नटुंगिएर बराबरीमा रोकिए जर्मनीको खातामा १० र स्पेनको खातामा ९ अंक हुन्छ । यता अर्को खेलमा हाल ६ अंक भएको युक्रेनले स्वीट्जरल्यान्डलाई हराए उसको खातामा ९ अंक मात्रै हुने हुँदा अर्को चरण जाने बाटो जर्मनी र स्पेनका लागि मात्रै खुला छ । यदि आफ्नो भूमिमा स्पेनले जिते ऊ ११ अंकसहित समूह विजेता बनेर अर्को चरण जानेछ । यसअघि जर्मनीको घरेलु मैदानमा भएको खेल १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २ मंसिर २०७७, मंगलवार १३:४८